အိမ်ဖော်မလေးကို အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာကို ရုပ်ရှသ်အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဒဲ့ဖြေရှင်လာတဲ့ ရုပ်သံ – Myanmar Update News
အိမ်ဖော်မလေးကို အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာကို ရုပ်ရှသ်အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဒဲ့ဖြေရှင်လာတဲ့ ရုပ်သံ
News-Update | May 15, 2020 | Celebrities | No Comments
အိမ်ဖော်မလေးကို အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာကို ရုပ်ရှသ်အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဒဲ့ဖြေရှင်လာတဲ့(ရုပ်/သံ) ….
၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်နှင့် ပြဇာတ်အစည်းအရုံး အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်ကောင်စီ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်ကောင်စီစည်းရုံးရေးကော်မတီ အဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အမည်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။“ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက လူယုတ်မာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြစ်မှုကျူးလွန် ထားခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ ကို တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ပြီးတာ နဲ့
အစည်းအရုံးကနေ ရာသက်ပန် ထုတ်ပယ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်” လို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဦးဝင်းမြိုင် က ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်..အိမ်ဖော် အမျိုးငယ်အား အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာအပါအဝင် လေးဦးကို
ယနေ့(မေလ ၇)နံနက် ၁၁ခွဲခန့်တွင် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ရမန်ရယူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ယနေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွင် ဥပဒေအကြံတောင်းရယူခဲ့ကာ မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ရုံးထုတ်ရမန်ရယူခဲ့တယ်လို့တော့ သိထားပါတယ်
Photo -မင်းရန်နောင်Myanmar Celebrity TV
မငျးရာဇာ ကို ရုပျရှငျအစညျးအရုံးက ရာသကျပနျ ထုတျပယျမယျ!
“ရုပျရှငျအစညျးအရုံးက လူယုတျမာတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျး မဟုတျဘူး။ ပွဈမှု ကြူးလှနျ ထားခဲ့တဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးရာဇာ ကို တရားရုံးက ပွဈဒဏျ ခမြှတျ ပွီးတာ နဲ့ အစညျးအရုံးကနေ ရာသကျပနျ ထုတျပယျဖို့ စီစဉျထားတယျ” လို့ ပွောလာတဲ့ သရုပျဆောငျ ဦးဝငျးမွိုငျ နှငျ့ ခဏတာ။ Myanmar Celebrity TV Update: Actor U Win Myaing comments on Min Yar Zar’s criminal case. #MyanmarActor #UWinMyaing #MyanmarFilmOrganization
Posted by Myanmar Celebrity on Friday, May 15, 2020